Home News Kooxda Al-shabaab oo sheegatay Masuuliyadda Qaraxii Muqdisho ka dhacay
Kooxda Al-shabaab oo sheegatay Masuuliyadda Qaraxii Muqdisho ka dhacay
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in Qaraxyo iyo Weerar toos ah ay halkaasi ka dhaceen.
Waxaa sidoo kale jira Khasaare soo gaaray dad Shacab ah oo halkaasi Maraayay.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen Weerarkaasi.
Labo Qarax ayaa laga maqlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha kan koowaad ayaa ka dhacay Iridda Galo Wasaaradda, waxaana loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa.
Daqiiqado ka dib ayaa sidoo kale Qarax laga maqlay Gudaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha , waxaana la sheegay in uu ahaa ruux isqarxiyay.
Khasaaraha rasmiga ah wali lama xaqiijin karo laakiin hadda ma jiraan wax xabado ah oo dhacaya.
Previous articleShaqaalaha W/Arrimaha Gudaha oo Dabaqyo isku Tuuray ka dib Qarax Lagu Weeraray
Next articleDhaawac iyo dhimasho ayuu geestay weerarkii maanta (VIDEO)
Maxeey Sababta Puntland Ciidamo Gaaraya 3,000 Askari Ugusoo Dirtay Dowladda (AQRISO)